दलान नेपाल : 2013
फोरम नेपालमा तीव्र विवाद
निर्वाचन आयोगमा हिजो समानुपातिकको नामावली नबुझाएका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालमा तीव्र विवाद रहेको खुल्नमा आएको छ । हिजो केही नेताले नाम नछान्न सकेको भन्दै पन्छिएका थिए भने केहीले पार्टीको मागलाई अगाडी सारेका थिए । तर फोरम नेपाल स्रोतका अनुसार हिजो नामलाई अन्तिम रुप दिनका लागी वोलाईएको संसदीय बोर्डको बैठकलाई उपाध्यक्ष लालबाबु राउत र महासचिव रामसहाय यादवले बहिष्कार गरेपछि फोरम नेपालले अन्तिम नामावली बुझाउन सकेका थिएनन । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा फोरमका एक नेताले भने हिजो बैठकमा अध्यक्ष यादव समानुपातिकमा पाएको ८ ओटा सिटमा विरेन्द्र महतो, श्रवण अग्रवाल, डा. शिवजी यादव, मनोज यादव र महिलावाट उपमा देव, रीता अग्रवाल, पुनम अग्रवाल र छाया शर्माको नाम सिफरिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्तहरु अध्यक्ष यादवले प्रस्ताव गर्ने वितिकै उपाध्यक्ष राउत र महासचिव यादवले खाली डोनरहरुलाई मात्रै सभासद बनाउने भए आफुहरुको के काम भन्दै बैठकवाट वाहिरिएका थिए । उपाध्यक्ष र महासचिव वैठकवाट बाहिरिएपछि अध्यक्ष यादवले बैठक स्थगीत गरेका थिए । अध्यक्ष यादवले उपाध्यक्ष र महासचिवलाई फकाएर भोली सम्म उक्र नामावली बुझाउने सुरमा रहेको स्रोतको भनाई छ । तर फोरम नेपालका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष यादवले मनोमानी गरे फोरम नेपालले फेरी ठुलो धक्का खान सक्छ ।
फोरम नेपालले समानुपातिक नामावली आज नबुझाउने
निर्वाचनमा धांधली भएको भन्दै छानविनको माग गर्दै आएका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले आज निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक नामावली नबुझाउने भएका छन । फोरम नेपाल स्रोतका अनुसार फोरम नेपालको संसदीय बोर्डको आज बसेको बैठकले आज अन्तिम दिन भएपनि नामावली नबुझाउने निर्णय गरेको छ ।
भारतमा मधेसी विद्यार्थीको पीडा
मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययनका लागि भारत जाने परम्परा धेरै पुरानो भए पनि हालका वर्षहरुमा भारतमा अध्ययनका लागि जाने मधेसी विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। काठमाडौँ वा पहाडका अन्य सहरमा मधेसी विद्यार्थीलाई भारतीय भनेर हेपिएका कारण, मधेसका अभिभावक आफ्ना छोरा–छोरीलाई भारतमै पढाउनु तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित ठान्छन्।
भारत अध्ययनको सिलसिलामा रहेका मधेसी विद्यार्थीलाई प्रथम पीडा भारतीय रेलयात्रामा सुरु हुन्छ। जसरी रेल उत्तरी बिहार र पूर्वी उत्तर प्रदेश नाघ्छ, अनि सुरु हुन्छ, त्यत्तिकै स्थानीयहरुको रेलमा ताण्डव। भोजपुरी, मैथिली वा अवधी, थारु भाषा बोल्नेहरुलाई बिहारी भन्दै सिटबाट गालिगलौजका साथ उठाइन्छ। दोस्रो चोट तब लाग्छ, जतिखेर गन्तव्यमा पुगिसकेर बस्नका लागि भाडामा कोठा खोजिन्छ, मकान मालिकले जब कहाँको बासिन्दा भन्ने प्रश्न सोध्छ, नेपाली भनेर उत्तर दिँदाखेरी सबले यस्तो शंकाको साथ हेर्छन कि मानौं उसको अगाडि आतंकवादी उभिएको होस्। जति नागरिकता देखाउँदा पनि ऊ भनिराख्छ– 'तुम तो नेपाली नही लगते' र अवैधरूपमा नागरिकता लिएको आतंककारी होला भनेर शंका गर्छ। प्रष्ट्याउँदै जाँदा र अझै प्रमाणहरु देखाउँदा बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेशबाट बसाइँ सरेर नेपाल बसेका भगौडा भन्छन्। नेपालका पहाडी इलाकामा भारतीय भनेर हेपीएका मधेसी विद्यार्थी जब भारतमा पनि सोही व्यवहार पाउँछन् तब उनीहरु आफ्नो पहिचानबारे अलमलिन्छन्। त्यसपछि धेरैले त नेपाली देखिने आफ्नो रङ रूपदेखि लिएर भोजपुरी, मैथिली तथा थारु भाषा बोल्नै बन्द गर्छन्।
.......नत्र राज्यको अवज्ञा गर्छु - महन्थ ठाकुर
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेशको मुद्धालाई सम्बोधन नगरे आफुहरु राज्यको अवज्ञा गरेर विद्रोहमा जाने बताएका छन । पार्टीको छैठौ बार्षीकोत्सवको अवसर शनिवार विहान काठमाडौको विजुली वजार स्थित पार्टी कार्यलयमा झण्डा पुजा पछि पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै ठाकुरले आफुहरु संवैद्यानिक रुपमै मधेशको आवाजलाई यो राज्यले सम्बोधन गरोस भन्ने चाहेको बताए । राज्य व्यवस्थाको नियतप्रती आम मधेशीहरु रुष्ट छन, त्यस्तो अवस्थामा राज्य सचेत भएन भने जनता चुप लागेर बस्दैनन, ठाकुरले भने । मधेशीहरुले अनुभुती गर्ने गरी कुनै परिवर्तन देखिएको छैन, खोई मधेशको मातृभाषहरुको सम्मान ? जनकपुर र राजविराजमा अहिले पनि सरकारी कामकाज मैथलीमा किन हुदैन ? ठाकुरले प्रश्न गर्दै भने, मधेशी समुदायको भाषा, संस्कृती र जग्गा लगायतको सबै माथी यो राज्यले आक्रमण गरेको छ ।
तमलोपाका ६ बर्षे तराना
१३ पुष २०६४ मा तमलोपाको घोषणासभा
१३ पुष २०६४ मा स्थापना भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी आज देखि ६ बर्ष पुरा गरेको छ । पहिलो संविधानसभाको पुर्वसन्धयामा गठन भएको तमलोपाले उक्त निर्वाचनमा २१ सिट हाथ पारेका थिए । पहिलो संविधानसभाको अन्ततिर आईपुग्दा ११ सिटमा झरीसकेको थिए । भर्खरै सकिएको दोस्रो संविधानसभामा पनि उनले ११ सिट नै हाथ पारेका छन । यसरी पहिलो संविधानसभाको विघटनको अवस्था र दोस्रो संविधानसभामा आएको नतिजालाई तुलना गर्ने हो भने तमलोपा मात्रै एउटा यस्तो पार्टी भयो जसले आफनो शक्तिलाई विभिन्न प्रतिकुलताको माझमा पनि कायम राख्न सके । भलई तमलोपाले गरेको आशा अनुसार नतिजा नआए पनि । तर प्रश्न उठछ के तमलोपाको ६ बर्ष यतीकै सफल मान्न सकिन्छ त ? तर्क विभिन्न गर्न सकिन्छ, तर सम्रगमा तमलोपा केही असफलताका वावजुद सफल नै छ ।
सबै भन्दा पहिलो तमलोपाको उदयले मधेशमा अहिले लोकतान्त्रिक धार वलियो भएकौ हो । र मधेशको मुद्धा भनेको लोकतन्त्र भित्रको मुद्धा हो । दोस्रो संविधानसभाको नतिजाले केही गम्भिर प्रश्नहरु ऋगाडी आज तेर्साएकै छन, त्यसमा कुनै दुइमत छैन ? तर सम्रगमा भन्दा मधेशी पार्टीहरु अहिले केही कमजोर देखिए पनि नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा अंग बन्न पुगेको छ मधेश मुद्धा, जसमा तमलोपा र मुख्यगरी महन्थ ठाकुरको महत्वपुर्ण भुमिका छन । शायद मधेश राजनितीमा महन्थ ठाकुरको उदय नभएको भए उहिले मधेश माओवादीले कब्जा गरी देश अर्कौ अवस्थामा पुगीसक्थे ।
ठाकुर, यादव र महतो विच एकिकरणका लागी छलफल
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशी पार्टीहरु विच एकिकरणको आवश्यकता रहेको भन्दै, त्यसका लागी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो संग कुराकानी भइरहेको बताएका छन । निर्वाचन पछि पहिलो पटक बसेको फोरम नेपालको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकमा यादवले चुनावमा मधेशी पार्टीहरु हार्नुमा फुट मुख्य कारण रहेको बताएको एक केन्द्रिय सदस्यले बताए । निर्वाचन पछि म, ठाकुरजी र राजेन्द्र महतो विच पार्टी एकिकरणको वारेमा कुराकानी भईरहेको भन्दै यादवले पार्टीका नेताहरुलाई यसका लागी साकारात्मक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रिय सदस्यको भनाई छ । गएको शनिवार देखि काठमाडौको वालकुमारी स्थित पार्टी कार्यलयमा शुरु भएको बैठक विहिवार दिउसो सकिएको छ । बैठकले संसदीय समितीको सल्लाहमा समानुपातीक नामावली बुझाउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा भएको धांधली वारे महासचिव रामसहाय यादवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यसमिती समेत बनाएको छ । समितीले १ महिना भित्र अध्यन गरी पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाउने छन । त्यसैगरी पार्टीकै केही नेताहरुले निर्वाचनमा नाकारात्मक भुमिका खेलेको भन्दै कारवाही पनि बैठकले गरेको छ ।
शनिवार तमलोपाको छैठौ बार्षीकोत्सव
at 6:52 PM Posted by Dalan
आउदो शनिवार तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आफनो छैठौ बार्षीकोत्सव मनाउदै छ । १३ पुष ०६४ मा स्थापना भएको तमलोपाले हरेक बर्ष १३ पुषमा आफनो बार्षीकोत्सव मनाउदै आएको छ । बार्षीकोत्सवको उपलक्ष्यमा पार्टीले शनिवार विहान ८ बजे काठमाडौको विजुलीबजार स्थित पार्टी कार्यलयमा झण्डा पुजाको कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ भने दिउसो ३ बजे देखि ५ बजे सम्म डिल्लीवजार स्थित अमृतभोग कम्लेक्समा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
०६४ सालमा तत्कालिन नेपाली काग्रेसका तर्फवाट सरकारमा मन्त्री रहेकै बेला महन्थ ठाकुरले सरकार र पार्टी दुबैवाट राजिनामा दिई तमलोपा गठन गरेका थिए । पहिलो मधेश आन्दोलन पश्चात नेपाली काग्रेस भित्रै पटकपटक मधेशको मुद्धालाई सम्बोधन गर्न दबाब दिएका ठाकुरले सार्वजनिक रुपमा पनि आफनो असन्तुष्टिहरु व्यक्त गर्दै आएका थिए । काग्रेसले मधेशको मुद्धाको वारे सम्बोधन गर्न केही अग्रसरता नदेखाएपछि पहिलो संविधानसभाको पुर्वसन्धयामा ठाकुरले काग्रेस परित्याग गरेका थिए । र त्यसपछि उनकै नेतृत्वमा दोस्रो मधेश आन्द्योलन भयो जसले महत्वपुर्ण मानिएको निर्वाचन क्षेत्रको पुर्नसंरचना गराउन सरकारलाई बाध्य बनाएको थियो ।
काठमाडौमा मिथिला मन्थन
कार्यक्रममा कविता वाचन गर्दै रुपा झा
काठमाडौको सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा आफनो १४ औ एकल चित्रकला प्रर्दशनी गरिरहेका चित्रकार एससी सुमनले आइतवार मैथली कवि कवियत्री, गायक, चिन्तकहरुलाई भेला गराएका थिए । आईतवार दिउसो भेला भएकाहरुले गीत, कविता तथा आ आफना विचार राख्दै सुमनका चित्रकारिता प्रति टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा कविहरु रमेश रन्जन, धर्मेन्द्र विह्वल, अमरेन्द्र यादव, मुकेश प्रियदर्शी तथा कवियत्रीहरु रुपा झा, कन्चना झा लगायताकाहरुले कविता वाचन गरेका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रममा वरिष्ट संगीतकार तथा गायक गूरुदेव कामतको साथै गायकहरु मुकेश प्रीयदर्शी, रुपा झा लगायतकाहरुले गीत गाएर भेलालाई मन्त्रमुग्ध पारेका थिए । कार्यक्रममा चित्रकार सुमनका आमा मिना कर्णले मैथली लोकगीत गाएर कार्यक्रमलाई थप रोमान्चित पारेका थिए । यसैगरी कार्यक्रममा विद्धानहरु रामअवतार यादव, रामदयाल राकेश, विरेन्द्र पाण्डे लगायतकाहरुले मिथिला चित्रकला लगायत समसामयीक बिषयवस्तू माथी टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रम मैथलीका प्रसिद्ध साहित्यकार धिरेन्द्र प्रेमर्षीले संचालन गरेका थिए ।
मधेशवाद के हो ?
- मधेशी हितप्रति समर्पित राजनीतिक जीवन दृष्टि नै मधेशवाद हो । — सिके लाल, राजनीतिक विश्लेषक
- एउटा भूमि, संस्कृति र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको मधेश र मधेशीको पहिचान, समानता र समन्यायका लागि गरिने चिन्तन नै मधेशवाद हो । मधेशवाद भनेको विभेद विरुद्धको संघर्ष पनि हो । — महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, तराई–मधेश लोकतान्त्रि पार्टी
- विभेद, उत्पीडन र बहिष्कारणमा पारिएका मधेशी समुदायको सम्मान, पहिचान र अधिकारमाथि केन्द्रित राजनीतिक दर्शन नै मधेशवाद हो । विभेदको अन्त्य, समृद्ध मधेश र सम्पन्न देशको निर्माण नै मधेशवादको दर्शन हो । — शरत्सिंह भण्डारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी
- मधेश विद्रोहले कायम गरेको “मधेशवाद” सर्वमान्य हो जसले मधेशलाई आन्तरिक उपनिवेशवाद मुक्त गराई संघीय स्वशासनको प्रत्याभूति दिलाउँदै राष्ट्रिय साझेदारी प्राप्त गरी देशलाई समृद्धशाली बनाउने अभिभारा पूरा गर्दछ । — उपेन्द्र झा, राजनीतिक विश्लेषक
- सम्पूर्ण मधेशीको जीवन दर्शनबारे बुझ्ने वाद नै मधेशवाद हो । जसले मधेशी समुदायलाई विभेदमुक्त वातावरणमा बाँच्ने र विकास गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ । — राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
- मधेशवाद भनेको मूल रुपमा मधेशीको पहिचान, सम्मान तथा अधिकारको प्रत्याभूमि अन्तर्निहित रहेको सिद्धान्त हो । — राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, संविधानसभा निर्वाचन–२०७० घोषणापत्र,
महोतरीको जिल्ला वन कार्यलयमा नेपाल सरकारको ठाउमा मधेश सरकार लेखिएको
विचारबाट विचारधारा र विचारधाराले सैद्धान्तिक आवरण ग्रहण गरिसकेपछिको रुपान्तरणले ‘वाद’ को निर्माण गर्छ । वास्तवमा वाद विचारहरूको विकसित र सैद्धान्तिक रुप हो । ज्ञान बिनाको सैद्धान्तिक राजनीतिले विषयको वस्तुपरक पहिचान र दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । विकास वा परिवर्तन समाजको स्वाभाविक यात्राक्रम हो र यो योजनाबद्ध भएन भने विभेद निम्त्याउँछ । विभेदले विद्रोह र विद्रोहले अलगाव (विखण्डन) लाई जन्म दिन्छ । विभेद र बहिष्कारणको विरुद्ध ऐक्यबद्धता र वैचारिक सचेतना सँगसँगै अगाडि बढ्न सकेन भने ध्रुवीकरण हुनसक्छ । भूमि, जात, धर्म, वर्ग, लिंग र समुदायको आधारमा हुने ध्रुवीकरणले अन्यायलाई संस्थागत गर्न खोज्छ ।
मधेशी पार्टीहरु विच चाडै नाया मोर्चा बन्ने - अमरेश सिंह
निर्वाचनमा अनपेक्षित हार व्योहोरेका मधेशी पार्टीहरु विच नयां मोर्चाबन्दी हुन लागेको कांग्रेस नेता अमरेश सिंहले बताएका छन । नायां संविधानसभामा पनि चौथौ शक्तिको रुपमा मधेशी मोर्चा नै रहने सिंहको दाबी छ । सबै मधेशी पार्टीहरुको सभासद संख्या राप्रपा नेपाल भन्दा वढी छ, त्यसैले मधेशी पार्टीहरुको बन्न लागेको नाया मोर्चा नै संविधानसभाको चौथौ शक्तिको रुपमा रहने सिंहको भनाई उदृत गर्दै जनकपुर टुडेको अनलाईनले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । सिंह काग्रेस, एमाले र माओवादीले राप्रपा नेपाललाई मन नपराउने शक्तिको संज्ञा दिदै हामी शक्ति समिकरण देखि संविधानको अन्य विषयमा पनि राप्रपा भन्दा मधेशी दलहरुलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने सिंहको भनाई छ । सिंहले राष्टपति र उपराष्टपति पनि नफेरिने जिकिर गरेका छन । उनले निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको नामावली बुझाउने मिती केही दिनका लागी फेरी थप्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताएका छन ।
समाप्तीको बाटोमा सदभावना
at 3:36 AM Posted by Dalan
निर्वाचनमा लज्जाजनक हार व्योहोरेपछि २४ देखि २८ मंसीर सम्म सदभावना पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठक बस्यो । चुनावमा राम्ररी पछारेपछि सदभावनाका केही हनुमानहरुले महत्वपुर्ण निर्णयहरु ऋाउने आशामा थिए । तर नेताहरुको प्रवृतिका कारण केही झिनो आशा पनि समाप्त भएर आएको छ । बैठकले फेरी त्यही केही सदाबहार निर्णय गरेका छन, समानुपातिकका नामावली बझाउने जिम्मा महामहिम अध्यक्षलाई, संविधानसभामा सहभागी हुने, र संघीयता विरुद्ध ठुलो षडयन्त्र भयो भन्दै निर्वाचनमा भएको धांधली छानविन हुनुपर्ने । मधेशी पार्टीहरुले अब हेक्का के राख्नुपर्छ संघीयता अब मधेशी पार्टीको मात्रै एजेन्डा होईन र संघीयताकै नाराले राजनिती अगाडी वढने वाला छैन । संघीयता एउटा महत्वपुर्ण मुद्धा हो तर यसले नै दिर्घकालिन राजनितीकलाई जीवन्तता भेटने वाला छैन ।
जनताले निर्वाचन मार्फत सदभावनासंग आफनो नाता तोडिसकेको छ । तर, सदभावना पार्टीको यो बैठकले जनतासंग सदभावनालाई जोडने कुनै पनि निर्णय गरेका छैन । त्यसैले आजको मितीमा भन्दा अब सदभावना पार्टी समाप्तीको बाटोमा अघि वढीसकेको छ । निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा सदभावना पृष्टभुमिका एक जना नेता पनि यो चुनावमा निर्वाचित भएका छैन । प्रत्यक्ष तर्फ सदभावनका एक जना नेता संजय साह मात्र जितेका छन तर साह सदभावनाको नाम भन्दा पनि आफनो बाहुबलीले जितेका छन ।
निर्वाचन भन्दा अगाडी सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफूहरु ४० सिटमा जित्न गईरहेको दाबी गर्दै आएका थिए । कति सम्म भने उनले अरु मधेशी पार्टीहरुको सबै अध्यक्ष भन्दा आफु वढी सक्षम रहेको आलाप गाउदै आएका थिए ।
किन सक्दै सदभावना ?
२०४७ सालमा गठन भएको सदभावना पार्टी नागरिकता, समावेशी र संघीयता लगायतका मुद्धामा महत्वपुर्ण आवाज चाही उठाएकै हुन ? जुन मधेशी जनताको दिर्घकालिन हितमा थियो र सदभावनाको उक्त कदम इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले पनि लेखिने छन । प्रश्न आउछ - आखिर यत्रो महत्वपुर्ण मुद्धा उठाउने पार्टी किन सकिन लाग्यो त ? उत्तर पनि वढो सजिलो छ, सदभावना साच्चिकै जनतासंग जोडिने प्रयासमै कहिल्यै पनि लागेनन । विगत हेर्दा यो नै सदभावनाको नियत जस्तो देखिन्छ । गजेन्द्र नारायण सिंह देखी राजेन्द्र महतो सम्मको नियत एउटै देखिन्छ । गजेन्द्र नारायण सिंह त यती मात्रका लागी मात्रै ईतिहासमा सम्झने छन किनकी यी मुद्धाहरु उनकै अगुवाई प्रस्फुटित भएका थिए । तर उनी पनि सत्ताको खेलमा प्रवेश त्यही यसरी अल्झे कि त्यो भन्नु पर्ने बिषय नै छैन । फलस्वरुप तत्कालिन अवस्थामा धेरै आशालाग्दो अवस्था भएपनि सदभावनाले संगठन बनाउन सकेनन । जुन उपक्रम राजेन्द्र महतो सम्म आउदो पनि जारी नै रहयो र आज पनि मधेशमा मधेशी मनोविज्ञान कमजोर भएको छैन तर मधेशीहरु त्यो विकशित मनोविज्ञान जस्तै बहुआयमिक नेतापनि खोजीरहेका छन । जुन सदभावनाले दिन सम्भावना रती पनि छैन ।
गठबन्धनको नेतृत्वका लागी ठाकुरलाई अघि सार्ने तयारी
निर्वाचनमा धांधली भयो भन्दै माओवादीको अगुवाईमा सुरु गरिएको संघीय गठबन्धनको नेतृत्वको लागी तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अघि सार्ने प्रयास भईरहेको छ । केही समय अघि सम्पन्न १६ दलको संयुक्त बैठकले गठबन्धलाई ठोस रुप दिनका लागी भन्दै एउटा कार्यदल पनि गठन गरेका थिए । उक्त गठबन्धमा संग्लन १६ दलहरु मध्ये मधेशवादी दलहरु सहित अन्य केही साना दलहरुले माओवादी नेतृत्व प्रति विश्वास नरहेको भन्दै तमलोपाका अध्यक्षलाई त्यसको नेतृत्व गने आग्रह गरिने जनाएका छन । तमलोपाका महामन्त्री गोविन्द चौधरीका अनुसार यो बिषयमा आन्तरिक छलफल भईरहेको छ । अब बस्ने संयुक्त बैठकमा मधेशवादी दलहरुको तर्फवाट उक्त प्रस्ताव लगिने तयारी भईरहेको चौधरीले बताए ।
सुमनको सुगन्ध - काठमाडौमा १४ औ एकल मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी शुरु
at 2:47 AM Posted by Dalan
प्रसिद्ध मैथली चित्रकार एस. सी. सुमनको १४ औ एकल चित्रकला प्रदर्शनी मंगलवार देखि काठमाडौको सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा शुरु भएको छ ।
चित्रकला प्रर्दशनीमा चित्रकार एस सी सुमन
मैथली चित्रकला क्षेत्रका प्रख्यात हस्ताक्षर एस सी सुमनको १४ औ एकल चित्रकला पर्दशनी शुरु भएको छ । काठमाडौको सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा शुरु भएको उक्त प्रदर्शनीको भारतीय राजदुत रन्जित रे ले उदघाटन गरेका थिए । डिसेम्बर १०,मंगलवार देखि शुरु भएको प्रदर्शनी जनवरी ६ सम्म चल्ने छ । ४१ ऋोटा चित्रकला रहेको उक्त प्रदर्शको थिम चाही सुमनले, मानिस विनाको रुख र रुख विनाको मानिस, भनेर राखेका छन । सबै चित्रकलाहरु यही थिममा समेटिएको सुमनले बताए । उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय राजदुत रन्जित रे संसारमै प्रख्यात रहेको मिथिला चित्रकलाको आफु प्रंसशक रहेको बताए । भारतमा मिथिलाको मधुवनी पेन्टिग खुबै प्रख्यात छन, आफु पनि त्यसको प्रसंशक थिए तर सुमन चित्रकला हेरेपछि म मिथिला चित्रकला प्रति मेरो थप झुकाब वढेको रे ले बताए । सुमनको चित्रहरु अत्यन्तै सन्देशात्मक रहेको भन्दै यसले मिथिला चित्रकला उचाईलाई प्रस्तुत गरेको उनको तर्क थियो । प्रदर्शनीमा राखिएको चित्रकलाहरु रु २८ हजार देखि ६० हजार सम्मका छन । यस अघि २०११ मा सुमनले गरेको एकल चित्रकला प्रर्दशनीले काठमाडौमा खुवै चर्चा पाएको थियो ।
प्रदर्शनीमा भारतीय राजदुत रन्जित रे
साथमा यो पनि पढनुस-
सरोज मिश्राको कथा
at 2:28 AM Posted by Dalan
एउटा क्रान्तिकारी बुबाको झोला बोकेर हिडेका सरोज भन्छन, मधेशलाई स्वायत्ता सहितको संघियता घोषणा नगरुन्जेल विहे गर्ने त कुरै आउदैनन । मधेशमा म एउटा थप गुलाम बच्चा पैदा गराउने चाहना राखेनौ । वरु गुलामीवाट मुक्तिका लागी आफनो जीवन खर्चने प्रण गरे ।
सरोज मिश्रा- केन्द्रिय सदस्य, सदभावना पार्टी
२०३८ सालमा सरोज मिश्रा १० बर्ष कै थिए । तर राणा विरोधी आन्द्योलन देखि तराई कांग्रेसका संस्थापक बुबा श्यामलाल मिश्रा ०३८ को चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुदा उनी उक्त क्षेत्रमा बुबासंगै सबै गाउहरु पुगे । त्यो उमेरमा सरोजले के राजनिती गर्न त्यस्तो घुमफिर गरेको होला त ? उनी भन्छन, राजनिती गर्न त होईन तर बुबाले कार्यक्रमहरु गर्ने भाषणमा मलाई जान खुबै मन लाग्थ्यो, त्यसमा पनि उहा क्रान्तिकारी कविताहरु जताजतै लेखर सुनाउनु हुन्थ्यो, म त्यही लोभले सानै देखि उहा पछि पछि हिडे । सुरुमा बुबासंगै लान आनाकानी गर्नुहुन्थ्यो तर म हटटी स्वभाव भएकाले उहाको आनाकानीले केही फरक परेन । पछिपछि त उहाले आफै पनि अग्रसर भएर मलाई संगै लान थाल्नु भयो ।
श्यामलाल मिश्रा ००७ को राणा विरोधी आन्दोलनमा काग्रेसका सुनसरी मोरडका प्रमुख कमाण्डर थिए । उनको भुमिका भन्ने हो विपी कोईराला पछि दोस्रो स्थानमा आउथ्यो पुर्व तिर । तीनै मिश्राले पछि तराई काग्रेस हुदै सदभावना पार्टीका संस्थापक मध्येका एक हुन पुगे ।
०३८ मा पन्चहरुले मिश्रा संगै सप्तरीमा गजेन्द्र नारायण सिंहलाई पनि हराए । उनीहरु दुवै काग्रेस परित्याग गरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसको ठिक दुई बर्ष पछि डा गुरुडको प्रतिवेदन आयो जसमा मधेशीहरु भरतीय हुन भनेर आरोप लगाएका थिए । सरोज सम्झदै भन्छन, त्यती बेला म १२ बर्षको थिए, व्यापक हल्लाखल्ला त्यो प्रतिवेदनले मचायो । बुबा – श्यामलाल मिश्रा) तत्कालिन राजा विरेन्द्रलाई पत्र लेख्नुभयो र उक्त प्रतिवेदन लागु नगर्न आग्रह गरे । बुबाले पत्र लेखेर काडमाडौ आउनु भयो र काडमाडौमा मधेशीको पक्षमा पर्चा पम्लेटिगहरु गनु भयो । राती १२ बजे सुन्धाराको एउटा होटलवाट उहांलाई प्रहरीले समातेर लानु भयो । उहासंग जनकपुरका पत्रकार राजेश्वर नेपाली पनि हुनुहुथ्यो तर नेपालीलाई पत्रकार हो भनेर समातेनन । तीनै नेपालीले सरोजहरुलाई घरमा बुबाको जानकारी गराएका थिए । १२ बर्षे ती कलिला दिमागमा त बुबा चोर वा डाका नभएपछि यो प्रहरीले किन समातेको भनेर खुल्दुल्ली पसेछ । डेढ महिना पछि काठमाडौ प्रहरीको नियन्त्रणवाट मुक्त भएपछि श्यामलाल मिश्रा घर फर्के । सरोज बुबा घर फर्केको सम्झनालाई यसरी व्यक्त गरे, शुक्रवारको दिन थियो, हामी स्कुलवाट १ बजे तिर पढेर आउदा बुबा पनि भर्खरै घर आउनु भाको थियो । मैले बुबालाई हेरेपछि, बुबा तपाई लाई किन पुलिसले समातेको भनेर प्रश्न गर्न भ्याए । बुबाले पहिला खाना खाउ अनि त्यसपछि म तिमीलाई यो कुरा बताउछु भन्नु भयो । बुबासंग एउटै थालमा खाना खाए । खाना खाएपछि बुबाले डायरी लिएर दरबज्जा –दलान) मा जानु भयो मलाई लिएर अनि आफुहरुलाई राजनितीक आस्थाका कारण प्रहरीहरुले समातेको सम्झाए । मधेशका वारेमा आफुहरु कुरा गरिरहेकै कारण र अर्को तर्फ बहुदलवादी भएकाले । तर बुबाले सरोज सम्झाए, हेर छोरा सत्य कहिले पनि पराजित हुदैन, परेशानी मात्रै हुन्छ । त्यसैले जस्तोसुकै अप्ठायारा आइपरेपनि सत्य बोल्न छाडनु हुदैन र मातृभुमि प्र्रति वफदार हुनुपर्छ ।
०४० सालको प्रसंगवारे सरोज थप भन्छन, गजेन्द्र नारायण सिंहलाई प्रहरीले समातेर जलेश्वर जेल पठाईसकेका थिए भने रामजनम तिवारीलाई समातेर विरगंज जेल पठाईदिएका थिए । त्यतीवेलाका गुरुड रिर्पोटको विरोधकर्ताहरु मध्ये बुबा एक्लै वाहिर हुनुहुथ्यो । बुबा पनि डेढ दुई महिना सम्म घरमा सुत्नु भएनन । प्रहरीहरु बेलाबेलामा आएर घरमा छापा मारिरहथ्यो । अवस्था वडो दर्दनाक थियो । केही समय पछि गजेन्द्र नारायण सिंह र रामजनम तिवारी पनि रिहा भए र सदभावना परिषदको स्थापना भयो ।
यता सरोज पनि विस्तारै वालकपन वाट माथी उठदै थिए तर ०४२ सालमा रामराजा प्रसाद सिंहको बंम काण्ड हुन पुगे । बम काण्डको भोली पल्ट बुबाले आफनो डायरीमा विरेन्द्र नेपालको अन्तिम राजा हुने र नेपालको राजपरिवार आफनै कलहले ध्वस्त हुने लेखे र केहीलाई सुनाए पनि । त्यो कुरा तत्कालिा प्रशासन समकक्ष पुगेछ र सेनाले श्यामलाल मिश्रालाई समातेर लगे । सरोज उक्त समय सम्झदै भन्छन, ८ महिना सम्म त बुबा काहा हुनुहुथ्यो केही अत्तोपत्तो समेत चलेन, घरमा रुवाबासी थियो । कति दिन सम्म घरमा खाना पाकेन, हामीहरु भुजा खाएर रुदै बसेका थियौ । ८ महिना पछि अचानक एक विहान एक जना हाम्रो घरमा आउनु भयो र मिश्राजी विराटनगरमा हुनुहुन्छ भनेर भने, हामीलाई पत्याउन गाह्ँो भयो किनकी धेरै मिश्रालाई मारिदिए भन्ने गर्थे । तर बुबाले आफनो हाथमा लाउनु घडी उनी मार्फत पठाएका थिए कि विश्वास गरुन भनेर । हामी घरको सबै जना उनीसंगै तत्काल विराटनगर गयौ र प्रहरी काहा पुग्दा टाढावाटा मात्रै बुबालाई देखाई दिए । हामीहरु त्यती धेरै रोयौ पनि कि एक मिनेट भएपनि बुबासंग कुरा गर्न दिनुस भनेर तर प्रहरीले दिएन । बुबा परवाटै हाथ हल्लाउनु भयो । हामी बेलुकी आशूकै साथमा इनरवा फर्कयौ । दुई तीन पछि फेरी गयौ तर प्रहरी याहावाट लगी सक्यो भनेर भेटन दिएन । त्यसको डेढ दुई महिना पछिको कुरा हो, फेरी विहानै प्रहरीमा हवल्दारको काम गर्ने एक जना हाम्रो छिमेकी आएर मिश्रा काकालाई ईनरवा ल्याएको खबर दिए । हामी त्यतीकै सबै जना गयौ र त्याहा प्रहरीले बुबासंग राम्ररी भेटघाट गर्न दिए । त्यसको झण्डै छौ सात महिना पछि बुबा रिहा हुनु भयो ।
यसरी रिहा भएपछि र यता गजेन्द्रनारायण सिंह र रामजनम तिवारीले सदभावना परिषदको भुमिकालाई विस्तार गरिसक्नु भएको थियो । त्यसपछि बुबाको होलटाईमर म भए । ईनरवा वाट बुबाको चिठी लिएर गजेन्दै नारायण सिंह काहा जाने र उतावाट उहाको चिठी बुबाका लागी लिएर आउने । विरगंज पनि जान्थै रामजनम तिवारी काहा बुबाको चिठी लिएर । म त्यतीमा लक्का जवान भईसकेका थिए । र त्यही सुरमा ०४६ को आन्द्योलन पनि भयो । हामी सक्रिय पुर्वक त्यसमा लागे र त्यसपछि सदभावना परिषदलाई पार्टी बनाउने काम भयो म बुबासंग यती व्यस्त भए कि मेरो जवानीले मलाई कहिल्यै पनि म जवान हु भन्ने कुराको महसुस नै गर्न दिएन ।
र तीन जना क्रान्तिकारीहरु – बुबा श्यामलाल मिश्रा, गजेन्द्र ना सिंह र रामजनम तिवारी) को सामिप्यताले मलाई यो धर्तीमा गुलाम बच्चा नजन्माउने अठोठ गराई दिए । बुबा लगायत परिवारले सुरुले धेरै कोशिस पनि गरे तर मेरो विचारलाई पछि बुबाले सम्मान गरे । आज म ४० बर्षको उमेरमा मधेशकालागी दौडधुप गरिरहेको छु । दुई बर्ष अगाडी बुबा बित्नु भन्द्या केही दिन पुर्व वडो भावुक भएर त विहे चाही नगर्ने नै भईस त भनेर सोध्दा, बुबालाई सान्तवनाको लागी बुबा न आतिनुस मधेशका नागरिकहरुको स्वायत्ताको चाहना बमोजिम संघीयता घोषणा हुने वितकै म विहे गर्छु भनेर सम्भाए तर म अब विहे गर्ने सोचमा छैनौ । पुरै जीवनलाई यसरी नै मधेशको स्वतन्त्रता र विकासलाई खर्चीरहन्छू ।
मधेशलाई अपहरण गरिएको छ - महन्थ ठाकुर
at 10:19 PM Posted by Dalan
- महन्थ ठाकुर
- मधेशलाई यो राज्यले निर्वाचन मार्फत अपहरण गरेको छ ।
- निर्वाचन आयोग र सेनाले मिलेर निर्वाचनमा धांधली गरेका थिए ।
- अब हेर्दै जानु मधेशमा के के हुन्छ ।
- ०३६ सालमा बहुदल लाई हराएपछि राज्यले के ठानेको थियो, बहुदल हार्यो तर त्यस्तो भएनन नि । बहुदलको आन्दोलन थप सशक्त भएर आएको होईन ?
- एउटा कुरा के बुझनुस भने मधेशको मानसिकता माओवादी विरोधी छ । त्यसैले केही मुद्धामा सहकार्य हुन सक्छ तर अहिले मोर्चा नै बनिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैनन ।
- सबै कुरामा असहमती भएकाले सहमती गर्ने सहमती वाहेक याहा के भएको छ ?
- तपाइहरुले निर्वाचनमा धाधंली भयो भनेर निर्वाचन आयोगको बैठक पनि बहिष्कार गर्नु भयो । कसरी धाधंली भयो ?
समान्य भाषामा बुझनुस, जसरी हवाइजहाज अपहरण गरिन्छ । त्यसरी नै आज मधेशलाई यो राज्यले निर्वाचन मार्फत अपहरण गरेको छ । हवाईजहाजमा सबै यात्रीहरु ऋाफुलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेका हुन्छ । तर अपहरणकर्ताले त्यसलाई कसरी अपहरण गर्छ । अनि यात्रीहरु जहाजवाट झरेपछि मात्रै थाहा पाउछ कि हामी त अपहरणमा पो परेका थियौ ।
- तपाई कै भाषामा भन्नु पर्दा यसरी मधेशलाई कसले अपहरण गर्यो त ?
राज्यले यो निर्वाचनमा मधेशलाई सुनियोजित रुपमा अपहरण गरेको छ ।
- निर्वाचनमा त्यत्रो कर्मचारी, निर्वाचन ओयोग र सुरक्षाकर्मी र पर्यवेक्षहरु पनि त थिए । यतीको विचमा कसरी त्यो सफल भयो ?
मुख्यगरी निर्वाचन आयोग र सेनाले मिलेर निर्वाचनमा धांधली गरेका थिए । ४ गतेको ५ बजे सम्म कसैले पनि धाधंली भयो भनेर भनेका थिएन तर ५ बजेपछि नै ठाउठाउमा यो आवाज आउन थाले । तर म त ४ गतेको विहान निर्वाचन शुरु हुने वितिकै थाहा पाए कि निर्वाचनमा धाधंली भईरहेको छ । तपाई निर्वाचन आयोगका प्रमुख र सरकारलाई सोध्नुस मैले जानकारी गराएको थिए कि थिईन्न ।
- ऋनि उनीहरु के जवाफ तपाई फर्काए ?
उनीहरुलाई मैले ४ गते विहानै भन्दा उनीहरुले लिखित उजुरी दिनुस भने । त्यतीवेला म गाउमा थिए । केलुकी मंगलवा आउने वितिकै उजुरी पनि पेश गरे । उनीहरुले पनि धाधंलीको कुरा सुनेको भने तर अहिले आएर केही भएकै थिएनन भन्न थालेका छन ।
- उसो भए तपाईहरु अब के गर्नुहुन्छ ?
हेर्नुस, काठमाडौमा मानिसहरु जेसुकै टिकाटिप्पणी गरेर बसेपनि हामी मधेशलाई हार्न चाही दिदैनौ । र अब हेर्दै जानु मधेशमा के के हुन्छ ।
- के हुन्छ मधेशमा ?
हेर्दै जानु न । ०३६ सालमा बहुदल लाई हराएपछि राज्यले के ठानेका थिए । कि अब बहुदल हार्यो तर त्यस्तो भएनन नि । बहुदलको आन्दोलन थप सशक्त भएर आएको होईन ।
- तपाईहरु के माओवादीसंग मोर्चाबन्दी गर्न लाग्नु भएको हो ?
होईन , अहिले निर्वाचनमा धाधंलीको बिषयमा हामी अस्ती संयुक्त रुपमा छलफल गरेका हौ । एउटा कुरा के बुझनुस भने मधेशको मानसिकता माओवादी विरोधी छ । त्यसैले केही मुद्धामा सहकार्य हुन सक्छ तर अहिले मोर्चा नै बनिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैनन । यद्यपी एउटा कार्यदल बनेको छ, हेरै के हुन्छ ।
- मओवादीले अहिले संविधान संशोधन गरेर सहमतीय प्रणलीमा जानु पर्ने कुरा गरिरहेका छन , तपाईहरुको यसमा के मत छ ?
हेर्नुस नेपालमा सहमती भन्ने शब्द वडो आश्चर्यजनक रुपमा प्रयोग हुन्छ । याहा एउटा कुरामा मात्रै सहमती हुन्छ । वाकी केहीमा हुदैन । सबै कुरामा असहमती भएकाले सहमती गर्ने सहमती वाहेक याहा के भएको छ ।
- राष्टपतिको वारेमा पनि अहिले कुराहरु आईरहेको छ , तपाईहरुको यसमा के विचार छ ?
हामी यसवारे अहिले ठोस कुनै निर्णय गरेका छैन । आज देखि हाम्रो बैठक बस्दै छ ,त्यसमा हामी छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुुग्छौ ।
- समानुपातिकको नामावली त बुझाउनुहुन्छ नि ?
समयमै हामी बुझाउछु ।
भारतीय गाडी निश्चित नाकावाट मात्रै प्रवेश गराउनु पर्ने सिफारिस
भरतीय डिएसपिलाई पनि कारवाहीको सिफारिस
बर्दीयामा भारतीय प्रहरीहरु आएर नेपालीहरुको घरमा खानतलासी गरेपछि सरकारले गठन गरेको छानविन समितीले घटना दुवै तिर सुरक्षकर्मीहरु दोषी रहेको भन्दै कारवाहीका लागी सिफारिस गरेका छन । गृहमन्त्रालयका सहसचिव चुडामणी शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितीले गरलरीया छोटी भंसारमा खटेका २० जना सुरक्षकर्मीहरुलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी भारतीय प्रहरी पनि विना कुनै समन्वय गुलरीया छिरेको भन्दै भारतीय डिएसपी उदयप्रसाद सिंहलाई कुटनिती स्तरवाट कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसै गरी उक्त समितीले नै नेपालको हरेक निकाय अहिले सहज प्रवेश पाइरहेका भारतीय गाडीहरुलाई निश्चीत नाकावाट मात्रै भित्रयाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
त्यसको साथै समितीले सिमा सुरक्षा सम्बन्धी छुटै कार्यविधी पनि तयार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
मधेशी पार्टीहरु पनि निर्वाचन आयोगको बैठक बहिष्कार गरे
मधेशी पार्टीहरु द्धारा पनि निर्वाचन आयोगको बैठक बहिष्कार
समानुपातिक सिट वाडफाड सहितको जानकारीका लागी निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठक मधेशी पार्टीहरुले पनि बहिष्कार गरेका छन । उनीहरुले पनि निर्वाचनमा धांधली भएको भन्दै छानविन गर्न माग गर्दै उक्त बैठक बहिष्कार गरेको नेताहरुले बताएका छन । विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक वाहेक अरु सबै मधेशी पार्टीहरुले बैठक वहिष्कार गरेका हुन । वहिष्कार गरेका सबै मधेशी पार्टीहरु सोमवार मोओवादीले आयोजना गरेको बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए । वहिष्कार गरेका मधेशी पार्टीहरु संविधानसभामा जाने नजाने वारे पनि दुविधामा देखिन्छन । प्रायजसो मधेशी पार्टीहरु भित्र ठुलो स्वरमा सहभागी नहुने आवाज देखिन्छन । तर यी मधेशी पार्टीहरुका शिर्ष नेताहरुले परिस्थिती हेरेर आउदो साता मात्रै निर्णयमा पुगिने जनाएका छन ।
रेल्वे विस्तार कार्य पुस तेस्रो सप्ताहदेखि प्रारम्भ हुने
at 7:12 PM Posted by Dalan
निर्माण औजार इक्वीपमेन्ट समयमै नेपाल ल्याइए पुस महिनाको तेश्रो सातादेखि रेल्वे विस्तार कार्य प्रारम्भ हुने भएको छ ।
सीमासित जोडिएको धनुषाको इनर्वा गाविसबाट रेल्वे विस्तार कार्य सुरु हुने बताइएको छ ।
सुरुमा माटो पुर्ने र पुल निर्माण कार्य गरिने छ । भारतीय ठेकेदारहरुले नेपालमा विस्तार कार्य गर्न रुची नदेखाएपछि एक वर्षदेखि काम ठप्प परेको छ ।
गत असोज महिनामा एक भारतीय निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएपछि काम सुरु हुने सम्भावना बढेको छ ।
यसअघि भारतीय निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिन नरुचाएपछि पटक पटक टेण्डर गर्नुपरेको थियो ।
दुई पटकको सर्वे पूरा भइसकेको छ भने मुआवजा वितरण कार्य पनि धनुषामा ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको जनकपुर–जयनगर बर्दिबास व्रँेडगेज रेल्वे निर्माण साईट जनकपुरका प्रमुख टेक राज बोहराले जनाए ।
काम सुरु हुन नसकेको कारण मुआवजा कार्य पूरा हुन नसकेको बताउदै उनले काम सुरु हुने लगत्तै मुआवजा कार्य पूरा गरिने बताए ।
बोहराका अनुसार सरकारले भारतीय ठेकेदारलाई इक्विपमेन्ट निर्माण औजार ल्याउन भन्सार छुट गराउन सहयोग गरे पुस तेश्रो सातादेखि काम सुरु हुन्छ ।
ठेक्काको काम पूरा भइसकेको र निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने मेशिनरी सामान, सवारी नेपाल ल्याउन भन्सार छुटको लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ ।
भन्सार छुट पत्र प्राप्त भएको केही दिन भित्रै सामानहरु ल्याएर काम थाल्ने तयारी रहेको भारतीय ठेकेदारलाई उदृद्ध गर्दै प्रमुख बोहराले भने ।
भन्सार छुटको काम समयमै भयो भने आउ“दो पुस महिनाको तेश्रो सातादेखि काम सुरु हुन्छ–उनले भने । एक महिना अघि मात्र एक भारतीय कन्सट्रक्सन कम्पनीले रेल्वे विस्तार काम ठेक्का लिएको छ ।
ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले दुई वर्ष भित्रमा काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।
भारतको सहयोगमा जनकपुर–बर्दिबास रेल विस्तार गर्न लागिएको हो ।
रेल्वे विस्तारको लागि सर्वे भएको दुई वर्ष बढी भइसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन । जग्गा अधिग्रहणको मुआवजा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छ भने रेल्वे लीक ओछ्याउन, पुल निर्माण गर्न, माटो पुर्न, इन्जिन, बोगी लगायतका सामाग्री भारत सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
भारत सरकारले रेल्वे विस्तारको लागि टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनोट गरेको छ ।
सन् २०१० फ्रेवरीमा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार रेल्वे निर्माण्ँ कार्य ढिलोमा तीन बर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो ।
धनुषामा मुआब्जा वितरणको कार्य ९० प्रतिशत भईसकेको छ भने महोत्तरीमा ६० प्रतिशत भएको छ । ठेकेदार छनोट नभएकाले भारत सरकारले वर्षायाम सम्पन्न पछि मात्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने संकेत देखिएको बोहराले बताए ।
भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुदै बदिर्बाससम्म ६९ किल्लो मिटर व्रोड गेज रेल्वे निर्माण गर्न लागेको छ । जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिबास सम्म ५१ किलोमिट रेल्वे विस्तार गर्ने योजना छ ।
भारतसित टा“सिएको मुख्य नाकामध्ये एक जयनगरबाट रेलमार्ग मार्पmत राजधानीसहित विभिन्न शहरहरुमा सामानहरु आयात निर्यात गर्न सक्ने छ ।
न्युन ढुवानी खर्चमा बढी मालसामान आयात निर्यात गर्न सके सामानको मुल्य नियन्त्रणमा रह्ने अनुमान गरिएकोछ ।
at 8:39 AM Posted by Dalan
चुनावी रिर्पाेटिंगका लागी २७ कार्तिकमा हामी काठमाडौ छोडन लाग्दा मधेशका कयौन जिल्लावाट केही साथीहरुले काठमाडौको मिडियामा आईरहेको रिर्पोटिंग वारे रोचक तथ्यहरु सुनाईसकेका थिए । खास चुनावको मुखमा नेपालमा केही प्रमुख संचारमाध्यमहरुले गरिरहेको रिर्पोटिंगको स्तरलाई लिएर मधेशमा हल्लाखल्ला नै मचिसकेको अवस्थाको भान फेसबुक र टिवटरहरु मलाई पनि भएको थियो । र त्यही उत्सुकताका कारण हामी मधेश भर्दा, हामीले गरेको हरेक भेटघाटमा एउटा प्रश्न नछुटाई गर्ने गर्थे, मिडियामा आईरहेको रिपोर्टिगलाई याहाका समाजले कसरी लिईरहेको छ ? ती उत्तरकर्ताहरुले काठमाडौका मात्रै होईन कि स्थानिय एफएम र पत्रिकाहरुको वारेमा पनि टिप्पणी गर्दा हाम्रो मिडियाहरु समाजको नजरमा कति मर्यादित छन भन्ने कुरा छर्लग हुने गरी दिमागमा घुसे । कतिपय ठाउ आफैलाई पनि नरमाईलो हुने गरी आलोचन सुन्नु पर्यो तर पत्रकार हुदैमा आफनो आलोचना सुन्न वाट रती पनि विचलित नहुने मेरो वाणीका कारण रमाईलो संस्मरण पनि मेरो दिमागमा बस्न गयो र भविष्यका लागी कयौन मार्गदर्शन पनि । याहा म मधेशका जिल्लाहरुमा सुनेको टिप्पणी जस्ताको त्यस्तै लेख्ने प्रयास गर्दै छु । आशा छ कसैले पनि त्यसलाई अन्यथा लिनु भन्द्या साकारात्मक सोचका साथ पढनु होला ।
हाम्रो रिर्पोटिंग यात्रा महोतरीवाट सुरु भएको थियो । महोत्तरीको जलेश्वरमा भएको पहिलो कुराकानी मै हामी मिडियाको थुप्रै आलोचना सुन्नु पर्यो । दिप कुमार साह जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हुन । उनले काठमाडौको मिडिया देखि स्थानिय एफएमहरुको रामलिला सुनाउदा हामी स्तब्ध नै भयो । स्थानिय एफएमहरुले चुनावका बेला समाचार भन्दा उम्मेदवारका विज्ञापन बजाउन व्यवस्त थिए । अरु बेला महिनाको ३ देखि ४ हजारमा विज्ञापन बजाउने रेडियोहरु उम्मेदवारको विज्ञापन बजाउदा २५ हजार सम्म पाउथ्यो अनि रेडियोमा समाचार कसरी बज्छन, साहले कडा प्रश्न तेर्साएपछि हामी स्तब्ध भयौ । त्यसपछि उनले राष्टिय मिडियाहरु प्रति कटाक्ष छाडे । एउटा टेलिभिजनले मधेश राजनितीको बारे प्रस्तुत गरेको रिर्पोटलाई उनले वडो रमाईलो ढंगले प्रस्तुत गरे ।
त्यसपछि हामी धनुषाको जनकपुरमा पनि केही अग्रज पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दा पनि उनीहरु काठमाडौको मिडियाहरुमा खासगरी आएको चुनावी रिर्पोटिंगवारे असन्तुष्ट देखिन्थे । सिरहा पुग्दा त अचम्मको कुराहरु सुन्नु पर्यो । सिरहा बजारमा प्रचण्डको चुनावीसभामा पुग्दा सिरहाका चर्चीत समाजसेवी राकेश गुप्तालाई भेटे । चुनावी प्रसंगकै सुरुवातमै उनले आफु गएको तीन दिन देखि कान्तिपुर दैनिक पढन छाडिसकेको बताए । म त फेसबुकमै लेखिदिएको छू, निर्वाचन नहुन्जेल कान्तिपुर पत्रिका पढने छैनौ । किन यस्तो भनेर प्रश्न गरेपछि, उनले सिधै भने कान्तिपुरले गरिरहेको चुनावी रिपोर्टिग पढदा म झन कन्फयुज भईरहेको छू । सिरहाको सबै क्षेत्रमा मधेशवादी दलहरुका नेता कम्पीटिशनमा छन । तर तपाई पत्रिका पढनुस उनले खाली काग्रेस, एमाले र माओवादी मात्रै भिडन्तमा छन भनेर लेख्ने गर्छन । याहाका मानिसहरु पत्रिका पढदा आफैमा अचम्म लाग्ने गर्छन । त्इसपछि एउटा दैनिक पत्रिकामै काम गरिरहेका सिरहा संवादाताले वडो रोचक प्रसंग सुनाए । काठमाडौवाट गएका पत्रकार मित्रले एउटा एमाले नेताको साहारामा गाडी लिएछन अनि रिपोर्टिग गर्दा कसरी मधेशी पार्टीहरुको वारेमा लेखुन ।
सिरहा पछि सप्तरीको राजविराज पुग्दा मित्र श्यामसुन्दर यादवसंग भेटयौ । यादव पत्रकारिताका साथै मैथली अभियानी पनि हुन । राजविराजमा हामी पुगेकाु कुरा मैथली अभियानका एक जना अगुवा प्राध्यापक अमरकान्त झा समकक्ष पुगे । उहा वाहिर कतै जानु तरखरमा हुनुहुथ्यो । तर हामीसंग पहिला भेटन आउनु भयो । उहाले भेटने लगत्तै हिमालखवरपत्रिकाको वारेमा गुनासा पोख्नु भयो । केही महिना अघि उहाले एउटा मिथिलाको वारेमा लेख लेख्नु भएको थियो । पत्रिकामा आउदा त्यसको तोडमडोड गरिएको उहाको गुनासा थियो । म उहालाइ रमाईलो पाराले त्यो सन्दर्भलाई अन्यत्रै मोडे र आफनो पोजिसनको वारेमा स्पष्ट पारे । त्याहावाट विराटनगर पुग्दा मधेशी बुद्धजीवीहरुमा अरु थप आक्रोशित देखे । मोरडका ४ ओटा क्षेत्रमा मधेशी पार्टीहरुका उम्मेदवारहरु जित्ने भिडन्तमा थिए । तर मिडियामा आएका रिर्पोटहरुमा सबै ठाउवाट मधेशीहरु हर्दै छन भनेर मात्रै समाचारहरु आउथ्यो । एउटा दैनिक पत्रिकाको विराटनगर सहकर्मी जो मधेशी मुलकै थिए । उहाले वडो रोचक तथ्य सुनाउनु भयो । मधेशी शिर्ष नेताहरुको बारेमा एकै खाल र एउटै तथ्यलाई समेटेर तीन दिन साचार प्रकाशित भयो । ती मित्रले मिडियाले मधेशी पार्टीहरु विरुद्ध सुनुयोजित मिडिया क्यामपेनिंग भईरहेको जिकिर गरे ।
यसरी मिडियाको वारेमा व्यापक गुनासा आउनु व्यवसायीक पत्रकारिताको लागी कति सुहाउदो कुरा हो ? एक चोटी सोचौ त ? हुनत चुनाव भन्दा ढेड महिना पुर्व नै आफनो नियमित स्तम्भमा चन्द्रकिशोरले पेड न्युजको वारेमा उल्लेख गरेका थिए । र उनले काठमाडौको मिडियाले सुनियोजित रुपमा नेता विशेष लक्षित गरी रिर्पोटिंग गर्न थालेको उल्लेख गरेका थिए ।
मधेसवादी पार्टीहरूले मुद्दाका हिसाबले आफ्नो मौलिक पहिचान नै देखाउन सकेनन्। – जेपी गुप्ता
at 12:53 AM Posted by Dalan
– जेपी गुप्ता
- मधेसका मुद्दा असफल या नेपाली जनताले मधेसका मुद्दालाई अस्वीकार गरेको भन्दा पनि मधेसवादी पार्टी र मधेसी नेताहरूले तत्कालीन समयमा राखेको दृष्टिकोण वा उनीहरूको कार्यनीतिको पूर्णरूपेण असफलता हो।
- सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण मधेसी पार्टीहरू एक भएर चुनावमा जानसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न जातीय आधार निर्माणतिर लागेर आफू–आफूबीच नै थप वैमनश्यता बढाउनु। एकता भाव प्रदर्शन गरी एउटै मुद्दामा केन्द्रित रही चुनावमा जानुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन। यस्ता अनेक कारण छन् जसले मधेसी पार्टीलाई यस्तो नराम्रो परिणाम भोग्न विवश तुल्यायो।
० मधेसमा मधेसी दलहरूले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोग्नुपर्यो, यसको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– कारण त धेरै हुन सक्छन्, तर सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा मधेसका पार्टीहरू ०६४ सालको संविधानसभामा आएपश्चात् उनीहरूले सत्ताको स्वादमा मधेसी मुद्दाको विसर्जन गर्ने मार्ग अवलम्बन गरे। अर्थात्, ज्वलन्त मधेसी मुद्दामा केन्द्रित नरही उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई सत्तामा पुर्योउने भर्यारङको भूमिकामा मात्रै देखापरे। यो कुरा मधेस वा मधेसी जनताले प्रस्टसँग अनुभूत गरे कि मधेसी पार्टीहरूको ध्यान मधेसी मुद्दामा नभई सत्ताका लागि रहेको छ। यस्तै केही संवैधानिक र कानुनी कुराहरू पनि रहेका छन् जसमा मधेसी पार्टीहरूले प्रारम्भदेखि नै ध्यान दिएनन्। जस्तो कि मतदाता नामावलीमा नागरिकताको अनिवार्यता, निर्वाचन क्षेत्र वृद्धिबारे निरपेक्ष भाव राख्नु र त्यसपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण मधेसी पार्टीहरू एक भएर चुनावमा जानसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न जातीय आधार निर्माणतिर लागेर आफू–आफूबीच नै थप वैमनश्यता बढाउनु। एकता भाव प्रदर्शन गरी एउटै मुद्दामा केन्द्रित रही चुनावमा जानुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन। यस्ता अनेक कारण छन् जसले मधेसी पार्टीलाई यस्तो नराम्रो परिणाम भोग्न विवश तुल्यायो।
० मधेसी नेता वा दलहरूले अपनाएको एजेण्डा असफल भएको त होइन ?
– मधेसका मुद्दा असफल या नेपाली जनताले मधेसका मुद्दालाई अस्वीकार गरेको भन्दा पनि मधेसवादी पार्टी र मधेसी नेताहरूले तत्कालीन समयमा राखेको दृष्टिकोण वा उनीहरूको कार्यनीतिको पूर्णरूपेण असफलता हो।
० यतिबेला आएर मधेसी जनता सङ्घीयता चाहँदैनन् जस्तो पनि देखियो नि, काङ्ग्रेस र एमालेलाई मात्रै विश्वास गरेका किन होला र ?
– यो प्रश्नको आशय त काङ्ग्रेस र एमाले सङ्घीयता चाहँदैनन् भन्ने रहेको बुझिन्छ, तर काङ्ग्रेस र एमालेले पनि सङ्घीयताको कुरामा त जोड दिइरहेकै छन् नि। काङ्ग्रेस र एमालेले पनि पहिलेको सङ्घीयताविरोधी छविबाट आफूलाई बाहिर निकालेको छ। यसपटकको निर्वाचन प्रचारका क्रममा उनीहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा हामीले यो स्पष्टै अनुभूति गरेका छौँ । यथेष्ट जोड दिएका छन् सङ्घीयताको मुद्दामा उनीहरूले। अपितु, मधेस र माओवादीले चाहेकोभन्दा सङ्घीयताको स्वरूपमा उनीहरूको फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। तसर्थ, उनीहरूको विजयलाई सङ्घीयताको विरोधको जनादेशका रूपमा लिनु वा बुझ्नु सही हुँदैन।
० एक मधेस प्रदेशको मुद्दा मधेसले छोडेजस्तो छ नि, यसले पनि मत–परिणाममा फरक पार्योर कि ?
– आ, यसपटक अर्को एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा यो पनि भयो कि जसरी मधेसले मधेसको बारेमा एउटा निश्चित धारणा राख्दै आएको थियो, मधेसी दलहरू उक्त धारणामा अडेर रहन नसकेझैँ देखियो। उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरूले पनि मधेसमा विविध प्रदेशको कुरा ल्याए। यसले गर्दा मधेसवादी दल र अन्य दलहरूले अघिसारेका एजेण्डामा आममधेसी जनताले खास अन्तर पाएनन्। मैले भन्न खोजेको के भने मधेसवादी पार्टीहरूले यसपटकको निर्वाचनमा मुद्दाका हिसाबले आफ्नो मौलिक पहिचान नै देखाउन सकेनन्। यसको नकारात्मक असर सोझै मतपरिणाममा देखिएको छ।
० यसपटकको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा त क्षेत्रीय दलहरूको औचित्य पनि सकियो जस्तो छ नि ?
– चुनावी राजनीतिमा यस्तो देखिएला, हो, चुनावी राजनीतिमा यस्ता कुराहरू भइराख्छ। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले कमजोर जनादेश पाउँदा काङ्ग्रेसको औचित्य समाप्त भयो भन्ने मानसिकता केही मानिस वा केही समुदायमा थियो। तर, पाँच वर्षपछि भएको चुनावले त्यस धारणालाई गलत सावित गरिदियो। यस हिसाबले मलाई लाग्छ कि सङ्घीयताको कुरा, भाषाको कुरा र यस्तै अन्य मुद्दाहरू सर्वकालिक कुराहरू हुन्। पार्टीहरू बितेर गए पनि यसका बारेमा वस्तुपरक दृष्टिकोण कायम रहन्छ। यो दायित्व आजका दिनमा काङ्ग्रेस र एमालेको काँधमा गएको छ। सङ्घीयता, राज्यको रूपान्तरणको विषयलाई व्यवस्थित गर्न उनीहरूले सकेनन् भने आगामी दिनमा उनीहरूको असफलता छरप्रस्ट रूपमा देखिने नै छ।
० यसपटकको चुनावी परिणामले मधेसमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता औँल्याएको हो कि होइन ?
– यो सत्य या तथ्यलाई स्वीकार गर्न म कत्ति पनि हिच्किचाउँदिनँ। मधेसी जनताको भावनालाई मौजुदा मधेसी दल र नेताहरूले प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको स्पष्टै छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र उपेन्द्र यादवहरूको मधेसी मोर्चाको सम्पूर्ण रूपकै असफलता हो। मधेसी पार्टीहरूले अब पुरानै दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्न खोज्नुको साटो या मधेसका सवाललाई अनुत्तरित राख्नुभन्दा पनि यी सवालको समाधानका लागि मधेसी जनताको निम्ति उन्नत दृष्टिकोणका साथ सोचेर अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ। मलाई लाग्छ कि आफ्ना मुद्दाहरूको शान्तिपूर्ण तवरले समाधानका लागि नयाँ रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मधेसमा धेरै ठूलो जनमत छ। जो नेता असफल भए, जनताबाट तिरस्कृत भए, उनीहरूको विकल्पचाहिँ खोजिनुपर्दछ भन्ने चुनावको परिणामको सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्छ।
साभार- घटनाविचार साप्ताहिक